मध्यराति दिल्लीमा बन्धक बनाएका १२ नेपाली महिलाको उद्धार ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
मध्यराति दिल्लीमा बन्धक बनाएका १२ नेपाली महिलाको उद्धार !
प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७५, आईतवार १५:३४
नयाँदिल्ली । इराक, कुवेत र दुबई पठाइदिने भन्दै केही महिना देखि नयाँदिल्लीको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने छावला थाना, द्वारकामा बन्धक बनाएर राखिएका १२ जना नेपाली महिलाको शनिबार मध्यराति उद्धार गरिएको छ ।
उद्धार गरिएका महिलाहरुलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि नेपाल फर्काइने बताइएको छ। उनीहरुका तर्फबाट रानाविरुद्ध छावला थानामा एफआइआर दायर गरिएको छ। मुद्दालगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु हुने केआई नेपालका दिल्ली प्रतिनिधि नविन जोशीले बताए।